News - Etu esi egbutu ya ma mekwaa ngwa ahia
Etu esi egbutu ya ma mekwaa ya
Dị ka elu foto gosiri, ma eleghị anya, gị n'ógbè ahụ bụ otu dị ka nke a, ọ bụ oge ufodu na ị chọrọ chepụta ya na pụrụ iche ịke.Ma WPC decking factory mgbe niile gwara gị na ha ga-emepụta otu ma ọ bụ abụọ size na ogologo ngwaahịa. Mgbe ị na-anụ Ndị a, ị nwere ike iche na imewe gị enweghị ike ị nweta ya.Ọgbula onwe gị, WPC decking nwere ike belata ka ọ dabara ngwa ngwa nke nkọwa dị iche iche, nwee ike kpụọ ya ma kpọọ ya, gbue ya, jiri ya kpọrọ ihe. mee ya n’onwe gị.
Nwere ike ịme obe dị mfe mejupụtara deckingn'otu ụzọ ahụ ị ga-esi belata nro ọ bụla dị nro — ike ịrọ okirikiri ga-arụ ọrụ nke ọma. Igwe ike miter nwere ike inye ezi nkenke, ihe nkedo ziri ezi, yana okpokoro okpokoro na nkwado nkwado nwere ike ime ka ụdị ịcha ahụ dị mfe. A na-atụ aro pupụtara nke carbide — ole na ole ezé ka mma maka ebe dị larịị. Ekwela ka ube mmiri na-ekpo oke ọkụ mgbe ị na-egbutu ya n'ihi na nke a nwere ike ime ka ọnya ghara ịmalite ma ọ bụ wavy.
Ọ bụrụ na ịwụnye ihe nkpuchi gburugburu usoro dị ugbu a, enwere ike iji router rụọ ọrụ dị mkpị. Nhicha dị ọcha ekwesịghị ịhapụ ihe mkpofu ọ bụla, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ihicha ọnụ, kwuo na ị gaghị eji sander. Sanders ga-emebi ngwụcha ma n'ọtụtụ ọnọdụ, agaghị enwe ikike. Sawnwere aka ị na-ahụ ihe ga-arụ ọrụ nke ọma iji mee ka akụkụ gị gwụchaa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ou nwere ike belata ihe mkpuchi dị n'èzí dị ka uche gị, kwesịrị ịkpachara anya!
Extra spacing dịkwa mkpa n'etiti osisi nsọtụ na ebe mbadamba izute a mgbidi mgbe decking na-agba perpendicular na mgbidi. N'etiti mbadamba njedebe, nye ohere oghere 3/16. Ebe ogwe osisi na-ezute mgbidi, hapụ oghere 1/2 dị mma iji hụ na ihe ahụ nwere ike ịgbasa ma kwee nkwekọrịta na-abataghị na mgbidi ahụ. Nke a ga - eme ka ịdị ogologo nke oche ahụ dịkwuo elu ma gbochie ịkpọ isi ala n'oge akụkụ kachasị egwu nke ụbọchị.
WPC na-etinye bọọdụ WPC ka ọ bụrụ ihe nkedo ya ma ọ bụ jiri ihe nzuzo zoro ezo. Iji ogwe osisi jikọtara ọnụ dị oke egwu n'ihi na emepụtara ya nke ọma iji nyere aka jide ihe ahụ.
Ọ bụ ezie na mbadamba oche ndị mejupụtara na-arụ ọrụ nke ọma karịa pine oge niile, ọ ka nwere ike ịgbaji mgbe ị na-anya ngwa ngwa na nso nso. -Ga-egwu oghere ndị nwere ike igbochi nke a ime ma mee nrụnye na-aga ngwa ngwa ma dịkwa nro. Kama nke oghere ndị na-anya ụgbọelu, ụfọdụ ndị nrụpụta na-atụ aro igwu ala oghere dị ihe dịka 1/8 nke anụ ọhịa ahụ. Họrọ ntakịrị nha nke bụ otu dayameta dị ka isi nkedo ahụ ma kpachara anya ka ị ghara ịbanye n'ime ihe ahụ.
Countersink kposara ma ọ bụghị miri karịa ịghasa isi. E wezụga ịmepụta ihe siri ike karị, ịtụgharị uche miri emi nwere ike belata arụmọrụ nke ngwa ngwa ma wepụ akwụkwọ ikike ahụ. Ọ dịkwa mkpa na a ga-echedo kposara niile na nrịgo 90 ogo na mbadamba. Ntughari site na akuku nwere ike ime ka ihe ghara iru elu ma mechie ya.
osisi plastic mejupụtara decking, WPC ụlọ, WPC decking n'ala, WPC n'èzí decking, WPC mejupụtara decking, N'èzí WPC decking,